Arsenal oo barbaro la soo gashay kooxda Bournemouth. – Cayaaraha dunida
Arsenal oo barbaro la soo gashay kooxda Bournemouth.
04 Janaayo 2016
Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa barbaro 3-3 la soo gashay naadiga AFC Bournemouth oo ay booqatay lagana qaatay kaarka guduudan qeybtii labaad ee ciyaarta.
Kooxda Bournemouth ayaa goolka la horreysay waxaana kubbad uu dadab ka soo karoosay Junior Stanislas 16’daqiiqo Charlie Daniels inta si wacan u xakameeyey oo hal difaac ka leexsaday kubadda shabaqa u diray Gunners ayaana lagu hoggaamiyey 1-0.
Markale ayaa Arsenal gool kale laga dhaliyey waxaana gool ku laad loo dhigay gool u rogay 21’daqiiqo Callum Wilson, kaddib markii uu xerada ganaaxeeda Granit Xhaka xiddiga Ryan Fraser, kooxda AFC Bournemouth ayaana kulanka gacanta sare ku lahayd 2-0.
Arsenal ayey dhibaato kale soo gaartay kaddib markii uu ka dhaawacmay oo garoonka laga saaray 28’daqiiqo Francis Coquelin, waxaana lagu bedelay oo garoonka u soo galay Gunners xiddigeeda Alex Oxlade-Chamberlain.
Gunners ayaa isku dayday inay gool iska soo gudo qeybta hore ee ciyaarta, laakiin waa ay awoodi waayeen ciyaarta ayaana lagu kala nastay 2-0 oo looga gacan sarreeyey Arsenal.
Qeybtii labaad ee dheesha markii dib la isugu soo laabtay Markii dib la isugu soo laabtay Bournemouth ayaa la timid goolka saddexaad waxaana 58’daqiiqo u dhaliyey Ryan Fraser, kaddib markii kubbad uu garab kala soo xarooday uu ka dhex dusiyey labada lugood ee goolhaye Cech, kaasoo kulanka ka dhigay 3-0.
Arsenal ayaa hal gool iska soo guday waxaana kubbad karoos ka timid oo ku sii dhacday Olivier Giroud, 70’daqiiqo madax jiif ah ku dhammaystiray Alexis Sanchez, kaasoo kulanka ka dhigay 3-1.
Markale kooxda Arsenal ayaa la timid goolka labaad waxaana 75’daqiiqo kubbad dhul ma dhacdo ah u dhaliyey Lucas Perez oo bedel ku soo galay qeybtii labaad ee ciyaarta kaddib caawin uu ka helay Olivier Giroud, kulanka ayaana sidaas ku noqday 3-2 wali looga gacan sarreeyey Gunners.
Bournemouth ayaa dhabar jab uu soo gaaray waxaana 83’daqiiqo kaarka cas oo toos ah ka qaatay Simon Francis, kaddib markii uu jilaafay Aaron Ramsey.
90-ka daqiiqo ayaa soo dhammaaday waxaana lagu kordhiyey 6’daqiiqo oo waqti daayac ah, Arsenal ayaana la timid goolka barbaraha waxaana kubbad uu soo karsooray Granit Xhaka, madax ugu dhaliyey 9+2 Olivier Giroud, kulanka ayaana ku soo dhammaaday barbaro 3-3.
Arsenal ayaana ku jirta kaalinta afaraad ee kala sarreynta horyaalka Premier League, iyadoo leh 41-dhibcood kaddib 20-dhibcood.